Sheeko Yaab Leh oo ka Dhacday Minneapolis! – Rasaasa News
Sheeko Yaab Leh oo ka Dhacday Minneapolis!
Jan 29, 2011 axmed cali yuusuf, cabdi maxamed cumar, mineapolis, tagsiile, wafti
Sheeko mar naxdin leh marna amakaak ah, ayaa ka dhacday magaalada Minneapolis, dalka Maraykanka, xiligii uu booqashada ku yimid Madax weynaha Dawlad Degaanka Somalida [DDSI] Cabdi Maxamed Cumar [cabdi-iley].
Nin Tagsiile ah oo ka mid ah taageerayaasha Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu soo fadhiistay makhaayad ku taal badhtamaha magaalada Minneapolis si uu uga shaaheeyo xili fiid ah oo uu ku sii jeeday shaqo. Tagsiilaha ayaa dhagta la raacay hadal ay haysteen niman dhawr ah oo fadhiyay miis ay ku shaahaynayeen, sheekada ayaa ahayd madaxwenyihii iyo waftigii la socday way yimaadeen waxayna ka cashaynayaan Hotel hebal.
Tagsiilihii oo la yidhaahdo Axmed Cali Yuusuf, oo garanayey nimanka sheekada haystay ayaa soo dhex galay oo yidhi “ma run baa hadalkaasi,” mid baa yidh “waa run ee hadaad rabto orod tag hoteel hebel.”
Tagsiilihii, oo gacanta ku haystay caag shaaha [take away] oo uu hore u qaadan lahaa, ayaa dhaqaaqay oo Tagsigii galay kexeeyeyna isaga oo leh waa beentiin.
Mudo gaaban waxaa makhaayadii dib ugu soo noqotay, hadal naxdin leh Axmed Cali Yuusuf ahaa oo dhaawac ah ayey Booliska Jidaqdku xidheen. Tagsiilaha ayaa kolkii uu maqlay in uu Cabdi-iley joogo Minneapolis ay cirka iyo dhulku ku yaraadeen oo uu ku dhacay madax xanuun iyo cabsi aan la garan wax keenay.
Tagsiilaha ayaa sida la sheegay waxaa uu si khaldan u galay jid highway ah dhinac uusan lahayn isaga oo ka hortagay baaboorta jidka soo maraysay. Galida uu jidka khaladka u galay waxaa ka darayd ma uusan garanaynin in uu khaldan yahay iyo in kale ee si caadiya ayuu jidkii ugu socday.
Booliska jidadka ayaa si deg dega ah meel foga jidkii ka xidhay iskuna gudbay jidkii si ay u joojiyaan gaadhiga uu ruuxa cabsani wado. Nasiib wanaag iyo nasiib daro isku jira Booliska jidadka ayaa qabtay tagsiilihii isaga oo badqaba, waxaana laga baadhay in jidhkiisa ay ku jiraan waxyaabha badali kara maskaxda, waana laga waayey.
Waxaa la waydiiyey waxa ku dhacay wuxuu yidhi “Cabdi-iley ayaa la ii sheegay in uu Mineapolis joogo.” Booliskii way fahmi waayeen Cabdi-iley, waxaana loo taxaabay Axmed Cali Yuusuf Xabsi, waxaana laga qaaday sharcigii wadida gaadiidka ee uu ku xoogsanayey.
Axmed Cali Yuusuf, waxaan filayaa in uu ka mid yahay dad badan oo qaba cudurka nacaybka oo ayna dadka Afrikanka ahi u arag cudur. Dadka xanuunka nacaybka ayaa waxay khatar ku yihiin naftooda iyo bulshada ay la nool yihiinba.
Denmark: Somali Lagu Xukumay Xabsi Cimri ah